musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Iyo itsva Benny Hill Show yadzoka zvakare
Beadle's About - iyo Yakavanzika Kamera Ratidza kumashure munzira
Iyo Benny Hill Show uye mamwe maTV anofarira kubva kare achange achidzokera kuTV skrini kubva nhasi manheru zvichienda mberi Ndiyo Krisimasi yeTV, nhepfenyuro yenostalgia inotepfenyura yemwaka weKisimusi paFreeview, Freesat, uye Sky.
Alongside Benny Chikomo, chiteshi chinoendesa mabiko emhemberero kubva kumarongwa ekare kusanganisira Beadle's About uye Christmas TV specials kubva Kenny Everett, Mike Yarwood, Tommy Cooper uye Enderera mberi chikwata.
Ndiyo Krisimasi yeTV ndiyo mwaka rebrand ye Ndiyo TV Gold, iyo archive TV chiteshi ichitepfenyura muUK yose paFreeview chiteshi 91, Sky chiteshi 187 uye Freesat chiteshi 178. Mazhinji That's TV Kisimusi mashoo achawanikwawo pa That's TV's local TV network inowanikwa munzvimbo makumi maviri eUK paFreeview chiteshi 20. kana 7.
Awa yekutanga paIyo TV Kisimusi nhasi (China 18 Mbudzi 2021) na9pm kubhadharisa kaviri kwe Iyo Benny Hill Show.
Zvimwe zvinoratidzwa mumavhiki anouya zvinosanganisira Beadle's About, iyo yakavanzika kamera show inoratidzwa na prankster Jeremy Beadle, iyo yakatanga kubva muna 1986 kwemakore makumi maviri ichiita kuti ive iyo yakareba pasi rose inoramba ichimhanya yakavanzika kamera show. Kana iyo Benny Hill Show kana Beadle's About yakatepfenyurwa nechero TV chiteshi muUK kwemakore gumi nemapfumbamwe.
Benny Hill akaiswa segamba nevazhinji vemazuva ano vanoseka, kusanganisira TV nyeredzi uye munyori David walliams uyo akakumbira zvakawanda kwaari paTV, achitaura paTwitter muna 2017: "Ndinoshuva kuti Benny Hill yakapembererwa zvakanyanya paTV“. Comedian Tim Vine of Kwete Kubuda Mukurumbira anoti akachengeta matepi ake ekare eBenny Hill VHS achiti: “Ini handineti nazvo, uye ndinofunga kuti akaderedzwa zvakanyanya. "
Nguva yekupedzisira Caroline Aherne, munyori we sitcom Mhuri yeRoyal, akaudza Channel 4 documentary muna 1998: "Benny Hill ndaimuda zvakanyanya", apo comedian Ben miller of Armstrong naMiller mukurumbira akati: “Basa rake rekutanga rakanga rakavhurika pasi. Ndiye munyarikani akabudirira padanho repasi rose rakambogadzirwa neBritain. "
Benny Hill aive mutambi weBritish TV kwemakumi mana emakore, kutanga paBBC uyezve paITV apo mashoo ake akamhanya kwemamwe makore 20 kusvika 1989. Pakureba kwake maBritons akawedzera kuseka Benny Hill pane kuona. mwedzi uchimhara uye akahwina wekutanga wemibairo yakawanda muna 1954 paakavhoterwa paTV Personality of the Year. Benny Hill Show yakagamuchira mibairo ye11 panguva yake neITV uye mashoo ake akatumirwa kune dzinopfuura 140 nyika. Asi aya maBritish classics, kodzero dzaanodzorwa neEstate yake neThames TV, haana kupihwa rezinesi kune chero nhepfenyuro yeUK kweanoda kusvika makore makumi maviri.
Izvo zvinoshanduka manheru ano kana Ndiyo TV Kisimusi yatangwa kune imwe 7-vhiki kumhanya nemwaka weBenny Hill specials.
Ndiye TV Kisimusi Musoro weChirongwa, Kris Vaiksalu, akati: "Isu tinofara kuwana kodzero yezviratidziro zviviri zvakakura kwazvo munhoroondo yeBritish TV, Iyo Benny Hill Show uye Beadle's About, yemwaka wedu rebrand gore rino. Zviratidziro izvi chikamu chenhaka yetsika dzedu dzenyika. Kuona komedhi yekare itsika yeKisimusi yenyika asi kwemakumi maviri emakore aya anonyanya kufarirwa anga asipo kubva kumabiko.
"Tese tinoda imwe festive cheer inotevera gore rapfuura. Vataridzi vedu vakatizadza nezvikumbiro zvekuratidza Benny Hill uye tinofara kukwanisa kuita kuti chishuwo ichi cheKisimusi chiitike. Asi kune akawanda akawanda crackers paIyo TV Kisimusi. Takagadzirira Kisimusi TV nostalgia-fest ine mamwe mazita ane mukurumbira muTV nemumhanzi kubva makumi mana emakore apfuura. Tinovavarira kupa vataridzi vedu nguva yakakosha yeKisimusi izere nendangariro dzemashiripiti. Zviri nani uchenjere… nekuti Benny Hill naJeremy Beadle vadzoka paKisimusi ino!"
Gore rapfuura Ndiyo TV yeKisimusi re-brand yakakwezva vanopfuura mamirioni mana nevaoni mumavhiki mana kusvika 4.4 Zvita 27 (mabviro: BARB). Iyo chiteshi ikozvino yawedzera kufukidzwa kwayo uye inowanikwa kuUK yese paSky uye Freesat pamwe neFreeview.
Ndiyo TV inoratidza pa-skrini mameseji anounza kune vataridzi kuti zvimwe zvemukati zvinoratidzwa mumashowa zvinoratidza zviyero zvenguva iyo mashow akagadzirwa.
Zvibatiso zveKisimusi zvinoratidzwa paIyo TV Kisimusi inosanganisira:
Iyo Benny Hill Show - sarudzo yemakore makumi maviri aBenny Hill paThames TV 20 kusvika 1969
Beadle's About - iyo inonakidza Mugovera manheru yakavanzika kamera show yaive yakasarudzika yeITV masheti kubva 1986 kusvika 1996.
Pfuurira Kisimusi - mana ekisimusi eKisimusi specials kubva kuCarry On crew yakagadzirwa muna 1969, 1970, 1972 uye 1973.
Mike Yarwood Kisimusi Specials - mutambi uye mutambi wemuseki aive musimboti wezvirongwa zveKisimusi TV muma'70s nema80s. Ndiyo TV Kisimusi yakachengetedza kodzero kumitambo yake yakakosha yeKisimusi kubva muna 1982, 1984 na1985.
Kenny Everett's New Year Specials- the madcap comedian's New Year Specials kubva 1978, 1979 na1980 ine mazita makuru evaenzi nyeredzi kusanganisira Rod Stewart, Cliff Richard, David Bowie, David Essex, Billy Connolly, Bob Geldof uye DzeBonde Pistols. Uyezve, sekuwedzera kubata kune vateveri vaKenny Ndiyo Krisimasi yeTV ichave ichiratidza yakakosha hurongwa hwakagadzirirwa kuburitswa kwevhidhiyo uye isingamboratidzirwe paTV inoratidzira shamwari kusanganisira Cleo Rocos nemanheru Lionel Blair
Tommy Cooper -Kusarudzwa kwehunyanzvi kubva kune mumwe chete Tommy Cooper, tenzi wemashiripiti akasanganiswa
MUSIC, ARTS UYE DOCUMENTARY
Pavarotti: Yakakosha yeKisimusi - Tenor ane mukurumbira anoita mazororo ekirasi muchirongwa ichi paNotre Dame Cathedral muMontréal, akabatanidzwa nekwaya yevakomana, Les Petits Chanteur du Mont-Royal, nekwaya yevakuru, Les Vadzidzi veMassenet (1978)
Irish Tenor Trio: A Classic Kisimusi Tale - musanganiswa wakasiyana-siyana wemitambo yeKisimusi uye nziyo dzeIrish dzinoitwa neIrish Tenor Trio
100% Kisimusi Hits -Chati-inobhuroka Kisimusi hits kubva kuma'60s kusvika nhasi
Mwaka wezvinyorwa pamusoro pevanhu vane chimiro uye zviitiko zvezana remakore rapfuura kusanganisira '70s Punk muLondon, Princess Diana, John Lennon, Mambo George VI, Margaret Thatcher, David Bowie uyeMichael Rockefeller
Kutevera Kisimusi re-brand Ndiyo yakajairika masevhisi eTV anotangazve nehurongwa hutsva musi wa4 Ndira 2022.
PANE BENNY HILL SHOW
Iyo Benny Hill Show yaive yeBritish burlesque comedy-yakasiyana-siyana yakatevedzana muVaudeville-maitiro akagadzirwa nemutambi weBritish Benny Hill uyo akaridza kubva 23 Zvita 1962 kusvika 26 Zvita 1968 paBBC uye kubva 19 Zvita 1969 kusvika 1 Chivabvu 1989 paITV.
Benny Hill akaberekwa Alfred Hall muna 1925 muSouthampton uye anoyeukwa nemhuri uye nevaanodzidza navo se 'class clown'. Achiri kuyaruka, akasiya chikoro ndokushanda semukaka asati ashanda muBritish Army munguva yeHondo Yenyika II. Munguva iyi, akavaraidza mauto mumashoo akasiyana siyana uye akatora zita rake redanho, Benny Hill, mukukudza mutambi Jack Benny. Kutevera hondo, Chikomo chakatamba muLondon mimhanzi horo uye akawana zororo rake muTV mushure mekuenzanisa iyo BBC varaidzo show. Zviratidziro zvake zvakava mukurumbira wepasi rose muma'70s, achiwana Thames TV £26 miriyoni kubva mukutengesa. Hill akafira muLondon muna 1992 aine makore makumi matanhatu nemasere, mwedzi miviri mushure mekurwara nechirwere chemoyo.
Pakafa Hill, mutambi weAmerica Jack Lemmon akati: "Mumakore achangopfuura muimbi wandaifarira kupfuura zvese aive Benny Hill, aive shasha mumunda wake. Vanyanyi vakawanda vanobudisa hupfu hwakapfava; Benny akakupa pfuti. "
Beadle's About yakamhanya paITV kubva 1986 kusvika 1996 yakaratidzwa neanoshanda joker, Jeremy Beadle. Chiratidziro ichi chaizotamba zvidavado nemanomano kune veruzhinji vasingafungire vakarekodhwa muchivande vachishandisa makamera akavanzwa. Beadle anorumbidzwa nedemocratization yeterevhizheni, achiisa vanhu chaivo pamwoyo wezviratidziro zvake. Nyeredzi yaiva mutsigiri mukuru weVana vane Leukemia uye yakasimudza mari inodarika £ 100 mamiriyoni ekuda rubatsiro, ichiwana MBE muna 2001. Beadle akafa nepneumonia muna 2008 ane makore 59.
Maurice Cole, anozivikanwa zviri nani saKenny Everett, aive mutambi wechirungu uye redhiyo disc jockey. Mushure mezvitsinga paredhiyo yemakororo, aive mumwe wevaDJ vekutanga kupinda muRadio 1 yeBBC ichangobva kuvhurwa muna 1967. Everett akazobatana neCapital Radio muLondon mushure mekudzingwa basa neBBC muna 1970 nekuda kwekutaura nezvemudzimai weGurukota reHurumende. Everett aive shamwari nevanhu vane mukurumbira vanosanganisira Freddie Mercury, muimbi anotungamira waQueen, waakasangana naye paairatidzira Capital Radio Breakfast Show muna 1974.
Mukupera kwema'70s Everett akaunza mazany eredhiyo mavara uye jingles kuterevhizheni achigadzira mana akateedzana eITV (Thames) asati abirwa neBBC1. Zviratidziro zveITV zvaive nemukurumbira nekutamba nechikwata chevatambi, Hot Gossip, avo vakarongwa naArlene Phillips, akazove Dame uye akashanda semumwe wevatongi vekutanga paStrictly Come Dancing. Yese yemitambo yeThames ine Arlene Phillips 'Hot Gossip, kusanganisira ine mukurumbira wakashata New Year specials, ichatepfenyurwa paIyo TV Kisimusi.
Mutambi Michael McIntyre akatsanangura Kenny Everett "vamwe Baba" vake nekuda kwehushamwari pakati pevabereki vake nenyeredzi. Baba vaMcIntyre vaive munyori wezvinyorwa paKenny Everett show.
Everett akafa muna 1995, ava nemakore 50.
ABOUT IYO IYE TV NETWORK
Ndiyo Krisimasi yeTV (iyo icharatidza se "Ndiyo TV Xmas" pamaTV akawanda) inoshandiswa neIyo TV, chikamu cheIyo Media Group.
Ndiyo TV inomhanyisa makumi maviri emunharaunda TV masevhisi uye UK yenyika chiteshi parizvino yakanzi Ndiyo TV Gold, ese ari kudzokorora ku Ndiyo Krisimasi yeTV kubva 18 Mbudzi 2021 kusvika 4 Ndira 2022.
Ndiwo masevhisi eTV emunharaunda (Freeview chiteshi 7/8) anoshandira dzimba dzinopfuura mamirioni mashanu munzvimbo makumi maviri dzeUK. Iyo TV inoburitsa yakatarisana nenhau uye ruzivo rwenzvimbo yega yega padivi netiweki hurongwa 'muzongoza' unosanganisira nostalgic mimhanzi, varaidzo uye zvinyorwa.
Ndiyo chiteshi chenyika cheTV cheUK chakatangwa muna Chikunguru 2021 uye chave kuwanikwa kuUK-pase paFreeview chiteshi 91, Sky chiteshi 187 uye Freesat chiteshi 178. Ndiyo chiteshi cheTV UK-wide, chakanzi Ndiyo TV Gold kusvika 18 Mbudzi 2021, ndiyo 'Imba yeNostalgia' uye inonyanya kuburitsa komedhi, mimhanzi uye varaidzo uye zvinyorwa nezve vanhu nezviitiko zvezana ramakore rapfuura.
Sechikamu chegwaro rayo rekuita basa remagariro, Ndiyo TV inotenderwa neLiving Wage Foundation seMushandirwi Wepachokwadi Anorarama.